Ny Ekipa Afghàna Mpilalao Krikety, Manome Fanantenana Avy Any India · Global Voices teny Malagasy
Ny Ekipa Afghàna Mpilalao Krikety, Manome Fanantenana Avy Any India
Voadika ny 12 Avrily 2017 4:45 GMT
Ireo mpanohana mankahery ny ekipa Afghana nandritra ny lalao fifanintsanana T20 tany India. Sary avy amin'i Ieshan Wani.
Manome fanantenana lehibe sy hafaliana ho an'i Afghanistana izay rotidrotiky ny ady ny lalao krikety. Ilay ekipa dia kintana vao misandratra amin'ilay fanatanjahantena, izay nianaran'ilay andiana mpilalao tany amin'ny tobin'ny mpitsoa-ponenana ao Pakistàna.
Na rehefa milalao any ivelan'ny firenena aza ny ekipa, toa manana hery ny lalao krikety hamondrona ny firenena voafaritry ny ady sy fisarantsarahana. Nanao izany ny ekipam-pirenen'i Afganistàna nandritra ny volana Martsa, raha nandeha nanafika ny ekipa Irlandey mpilalao krikety taminà andian-dalao iraisam-pirenena Twenty20 tany India izy ireo.
Ara-teknika, Afganistàna no mpampiantrano ity lalao ity, satria nanasonia fifanarahana niaraka tamin'ny Birao Fanarahamaso ny krikety any India izy ireo mba hanendry ny kianja lehiben'i Shaheed Vijay Singh Pathak any Noida ho toy ny toeram-pandraisan-dry zareo. Ny Alarobia 8 Martsa, nandresy an'i Irlandy tamin'ny isa enina i Afganistàna, nefa tsy naharitra ela ny tsiron'ilay fandresena satria nanambara ny ISIS fa nanao fanafihana nahery vaika nahafatesana 49 tao amin'ny hopitaly miaramila lehibe indrindra tao Kabola.
“Ny ekipa mpilalao krikety no hany hafalianay tamin'ny fahoriana rehetra niainanay. Nampiray ny firenena iray manontolo izy ireo, satria ny olona rehetra avy amin'ny foko samy hafa nijery sy nampahery azy ireo, saingy tamin'ny alarobia dia nisaona ny firenena manontolo na teo aza ilay fandresena,” hoy i Asadullah, mpianatra iray nanofahofa ny sainam-pirenen'i Afganistàna, tamin'ny Global Voices
Roa andro taty aoriana, nivory mba hanome voninahitra ireo olona maty tamin'ilay fanafihana nialoha ny lalao iraisam-pirenena T20 andiany faharoa tamin'ny 10 martsa 2017 ireo ekipa roa. Nitondra fehin-tsandry mainty tamin'ny sandry havanana ny ekipam-pirenen'i Afganistàna ho firaisankina amin'ireo niharan-doza, toy ny andian-drahona mainty manaloka ny tany, mamela ny andro tsara hiposaka indraindray, ary hiverina indray aoriana kelin'izay.
mpilalao #AFG & #IRE mangiana fotoana fohy ho fahatsiarovana ireo niharan-doza izay namoy ny ainy tamin'ny fanafihana tao amin'ny hopitalin'i Sardar Daud Khan.#Kabul
Ny mpikapoka mahery indrindra ao Afganistàna , Mohammad Shahzad, no niverina voalohany tany amin'ny trano fisoloana akanjo rehefa avy voafandrika raha izy niezaka hijanona teny antsasa-dàlana.
Niha-natevina ny rahona raha niha-nidina ny isa, na teo aza ny firaradaraky ny fanafihana in'enina nataon'i Najeeb Tarakai izay nanampy an'i Afganistàna taminà isa mavesatra 184 teo amin'ny solaitrabe.
Nisy tamin'ireo mpijery nanararaotra ny zavatra nitranga mba hisariana ny saina ho amin'ny fahorian'ny firenena. Nisy zazalahy iray tao amin'ny mpanatrika nitazona sora-baventy izay mivaky hoe “ry mpanao politika iraisam-pirenena, atsaharo ny famonoana anay”. Ny sasany tamin'ireo namany nanisy loko mena tamin'ny tarehin'izy ireo, ho fahenoana ny rà.
Sora-baventy tazonin'ny mpijery. Sary avy amin'i Ieshan Wani.
Nampiantranoin'i India ireo lalao ireo noho ny olana mahakasika ny fandriampahalemana any Afganistàna, nefa mahatsikaiky, fa ny lalao krikety dia iray amin'ireo marimaritra iraisana tsy fahita firy ho an'ny Talibàna mafy hatoka sy ny governemanta. Tamin'ny 2012, ny Talibàna dia naneho ny fanohanany ny ekipam-pirenena fony izy ireo nifanandrina tamin'i Pakistàna tao amin'ny tanànan'i Sharjan any Emira Arabo Mitambatra, ary tamin'ny 2015, voalaza fa nanapoaka ny basiny ny tafiky ny governemanta sy ny Talibàna, tsy nifampitifitra akory fa tamin'ny hafaliana, rehefa voahosotra ho amin'ny fiadiana ny Amboara Erantany tamin'ny 2015 ny ekipa.
Nivoitra haingana be tamin'ny fifaninanana ny ekipa mpilalao krikety avy any Afganistàna . Ho sarotra ny handresy azy ireo ato anatin'ny fotoana fohy.#BANvAFG
Ny ekipa avy any Afganistan sy Irlandey mandritra ny lalao. Sary avy amin'i Ieshan Wani
Tsara Kosa Ny Fihetsiky Ny @BCCI Manampy An'i #Afghanistan Handamina Ny Lalao Iraisampirenena Any India
Toerana manana fenitra Iraisam-pirenena! #AfgvsIre
Matroka ny lanitra fa nitohy ny lalao. Sary avy amin'i Ieshan Wani.
Narehitra ireo jirobe ary nazava ireo sisiny maizina tamin'ny kianja raha tonga teo amin'ny mpiandry tsatokazo ny Irlandey ary niezaka hamono mba hampitovy ny fitambaran'ny isa amin'ny ekipan'i Afganistàna. Ny toetoetry ny T20, izay ny ekipa tsirairay dia manana tsipy 20 na baolina 120 mba hampitiakarana ny isa, dia midika fa mila manomboka mafy ny ekipa mpanafika. Nampiseho ny fahavononany Irlandy, nikapoka ny baolina ho any ivelan'ny kianja raha nanomboka nilatsaka ny orana.
Ny ekipa Afghana mifaly amin'ny fahalavoan'ny Iralndey iray mpiandry tsatokazo. Sary avy amin'i Ieshan Wani.
Farany voatery najanona ny lalao noho ny orana, nihazakazaka namonjy fialofana tery amin'ny sisin'ny kianja ireo mpilalao ary norakofana ny teo amin'ny toerana fanipazana baolina.
O ry orana! mandehana mandeha azafady, fa efa ho resy izahay. .#AfgvsIre @ACBofficials @Irelandcricket pic.twitter.com/a5wYuMrZnx
Toa nampiadana ny fahazoan'Irlandy vahana ny orana ary ireo tsipy baolina tsara kendry avy amin'ny ekipan'i Afganistàna dia namela ny ekipa andaniny hanatratra ny isa 111 amina tsipy 11. Miaraka amin'i Irlandy izay mikasa ny hamely, nanomboka nikatona ny varavarana tamin'i Rashid Khan, ilay tovolahy 18 taona mpikendry, nandravarava, nahazo isa dimy tao anatinà andianà tsipy baolina roa.
Nitohy nandresy tamin'ny lalao i Afganistàna ary nahazo fampaherezana mafy avy amin'ny mpanatrika tamin'i Rashid Khan sy Najeeb Tarakay nifampizara ny lokan'ny ‘lehilahy mendrika tamin'ilay lalao’.
Ireo mpankafy manomboka maka sary ny tenany miaraka amin'ny kintan'izy ireo mandritra ny fifandraisan-tanan-dry zareo tamin'izy ireo. Sary avy amin'i Ieshan Wani.
Fandresena fanimpolony nisesy azon'i Afganistàna tao aminà lalao T20, zavabita tsara indrindra erantany amin'ity fanatanjahantena ity.
Nisy zava-dehibe ihany nony farany! Fandresena fahafolo nifanesy tao amin'ny T20Is. Mankany amin'ny voninahitra! #AfgVsIre @ICC